Izizathu ezi-5 zokuba uluntu kufuneka lusebenzise ngokutsha | Ukuhlaziywa okuluhlaza
El inkunkuma yeyona nkqubo ilungileyo yokulahla okokugqibela izixhobo kunye neemveliso eziqwalaselweyo junk. Izinto ezingasenakusetyenziselwa injongo eziyilelwe zona okanye ezigqibe umjikelo wobomi bazo kufuneka ziphinde zisetyenziswe.
Inkunkuma yedolophu eqinileyo yinkxalabo kuzo zonke iidolophu needolophu kuba kufuneka zilawule iitoni zenkunkuma ngosuku. I-90% yenkunkuma eveliswayo kwimeko yasekhaya inokuphinda isetyenziswe kwakhona.
Kukho izizathu ezi-5 zokuba uluntu kufuneka lukhuthaze kwaye luphuhlise ukuphinda kusetyenziswe kwakhona.
Ukuqokelelwa kwenkunkuma kwiindawo zokulahla inkunkuma kuncitshisiwe, kuthintelwe iingxaki zempilo yoluntu, cungcoliseko amanzi, umoya, umhlaba kunye neengxaki zokusingqongileyo ezinje ngokugawulwa kwamahlathi, phakathi kwezinye izinto.
Ingeniso ebonakalayo inokwenziwa ngokuthengisa iimveliso kunye nezinto emva kokurisayikilishwa. Ukwengeza kwi ukonga umbane kunye nemithombo yendalo ekuveliseni iimveliso ezintsha.
Ukurisayikilisha kusenza sibe noqoqosho oluzinzileyo Inkqubo yoLawulo inkunkuma kwaye iphucula ucoceko ekuhlaleni.
Isenzo sokurisayikilisha sifuna ukuba onke amaqela entlalontle aphuhlise ngokufanelekileyo, oko ke kuqinisa ubudlelwane kunye nobabantu kunye neenkampani njengenxalenye yoluntu.
Esi senzo silula sinceda ukufundisa abantwana ngokubaluleka kokukhathalela umntwana. ngileyo kunye nefuthe lazo kumgangatho wobomi.
La Ishishini lokurisayikilisha kufuneka yomelezwe kwaye ikhuliswe njengentsika efanelekileyo kwezoqoqosho kuluntu ngalunye, ingapheleli nje ekunciphiseni umthamo wenkunkuma kodwa kwananjengendlela yokudala imisebenzi emitsha kunye neemveliso ezivela kwizinto ezihlaziyiweyo, kunye nokuvelisa inzuzo kwinqanaba lendawo.
Kubalulekile ukuba zonke iintlobo zenkunkuma ziphinde zenziwe kwakhona kuba izibonelelo zininzi kwaye ziyandiswa ngokuhamba kwexesha. Amazwe, iinkampani zabucala, imibutho yoluntu kunye noluntu lonke luyaphumelela xa iphinde yenziwa kwakhona.
Ukuzibophelela komntu kunye noluntu kubalulekile kwi Iinkqubo ze kwakhona ixesha elide, uphumelele kwaye wandise. Iglasi ingomnye wemizekelo ebalaseleyo, kuba yeyona mveliso irisayikilishiweyo emhlabeni.
Ukufumana ezinye iimveliso ukufikelela kumanqanaba aphezulu okurisayikilisha kuthatha ixesha kunye nomsebenzi owomeleleyo wolwazi ngokusingqongileyo, kodwa kunokufezekiswa, sonke singasebenzisana ukuze okungakumbi kwenziwe ntsha kwakhona iplanethi Ucoceke kwaye usempilweni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Ukonga umbane » Ikhaya eliGreen » Izizathu ezi-5 zokuba uluntu kufuneka lusebenzise ngokutsha
UMarlyn Daniela Figueroa CASTRO sitsho
OKO KUFUNEKA SIHLALE SIYIJENGA YONKE INTO YOMZEKELO Iibhotile zeplastikhi NEBANANA SHELL
Phendula uMarlyn Daniela Figueroa CASTRO
Ndiyithande kakhulu le nkcazelo
, iluncedo kakhulu
Impembelelo yamandla omoya kwimbonakalo yomhlaba